Fanafihana “cash point” nisesisesy teto an-dRenivohitra : vehivavy iray sy lehilahy telo voasambotry ny polisy | NewsMada
Fanafihana “cash point” nisesisesy teto an-dRenivohitra : vehivavy iray sy lehilahy telo voasambotry ny polisy
Par Taratra sur 17/03/2020
Voasambotra teny Ambohimanarina, ny alakamisy sy asabotsy teo, ny olona efatra isan’ireo tambajotran-jiolahy mpanao fanafihana “cash point” eto an-dRenivohitra. Tratra nandritra izany ihany koa ny vehivavy vadin’ny iray amin’izy ireo.
Voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny Sut na Sureté urbaine de Tananarive, ny alakamisy sy ny asabotsy teo, ireo andian-jiolahy malaza amin’ny fanafihana mitam-basy eto an-dRenivohitra. Isan’ireo tratra tamin’izany ihany koa ireo jiolahy nanao fanafihana raim-pianakaviana teny Ilanivato, andro vitsy lasa izay. Ity farany izay namoy ny ainy taorian’ny tifitra nataon’ireo jiolahy azy. Araka izany, ny 5 marsa teo, nisy olona tsara sitrapo nanome vaovao ny polisy mahakasika ireo andian-jiolahy tompon’antoka amin’ny fanafihana nisesisesy “cash point” eto an-dRenivohitra. Taorian’izay, nisokatra ny fanadihadiana ka voasambotra teny Ambohimanarina ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro ny lehilahy miisa telo. Fantrata nandritra ny fanadihadiana ihany koa fa eny Anosibe, eny Namontana, eny Anosipatrana, eny Andavamamba ary eny Ampefiloha ny toerana fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny.
Isan’ireo olon-dratsy gagilahy eto an-dRenivohitra ireo jiolahy voasambotra ireto. Fantatra fa misy mpamerin-keloka ny iray amin’izy ireo ary vao avy nifonja 7 taona.
Nambaran’ny polisy mpanao fanadihadiana fa basy sy big boss ny fampiasan’ireo jiolahy mandritra ny fanafihany. Nohamafisin’izy ireo tamin’izany fa ny roa amin’ireo telo lahy vosambotra ireo no manondro sy manome vaovao mahakasika izay mpanjifa tokony ho lasibatra amin’ny fanafihana. Voasambotra, ny asabotsy teo, ihany koa ny vehivavy iray fantatra fa nitondra ireo fitaovam-piadiana nampiasain’ireo olon-dratsy ireo. “Tsy tratra teny aminy intsony anefa ireo fitaovam-piadina ireo tamin’ny fotoana nahasamborana azy”, hoy hatrany ny fanazavan’ny polisy, araka ny loharanom-baovao. Io vehivavy io izay fantatra fa vadin’ny iray amin’ireo olon-dratsy.
Nohazavain’ny polisy fa mbola karohina ankehitriny ny naman’ireo jiolahy. Taorian’ny fampanoavana, omaly, kosa, naiditra vonjimaika am-ponja eny Tsiafahy ireo jiolahy miisa telo raha miandry ny fotoam-pitsarana azy eny Antanimora ilay vehivavy.